နူးညံ့သောအရွယ် (Winnipeg အခမဲ့စာနယ်ဇင်း) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
အဘယ်သူမျှမသန့်ရှင်းရေးတက်သငျသညျဂါဗြေလယူဆပါသည်သူမှန်မှန်ညစ်ညမ်း၏ညစ်ညမ်းသော megabytes-တန်ဖိုးရှိကိုလောင် 11 ၏အသက်အရွယ်ကနေပြောပါတယ်သောသူနှင့်အတူညစ်ညမ်းပြောနေတာဖွင့်သည့်အခါဘာသာစကားကိုရှိပါတယ်။
ဒါဟာနောက်ဆုံးမှာအခြားလူသားနှင့်အတူကိုမှန်ကန်ထိတွေ့နိုင်သောလိင်အတွက်မဆိုစိတ်ဝင်စားသူ့ကိုလုယက်တဲ့မလှူခဲ့ပါတယ်။ မိမိအဇာတ်လမ်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရသဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်သစ်ကိုပုံမှန်နှင့်အတူပန်းချုပ်ကစားနည်းမိဘများအတွက်သတိပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာစကားကိုနားထောငျဖို့လှယျကူသောပုံပြင်မဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်မသက်ဆိုင်အရေးပါသောတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများ၏ ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ခတ်စေသောအကြမ်းဖက် porn
အဘယ်အရာကို 27 ယခုယူဆပါသည်တဲ့အလေ့အထသို့ကြီးပြင်းပုံမှန်, ကျောင်း-ကောင်လေး voyeurism နှင့်တူးဖော်ရေးအဖြစ်ထွက်စတင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်တိုင်းနည်းနည်းအဖြစ်မတရားသောသူတစ်ဦးစွဲအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းမရှိဒုက္ခရှိပါတယ်။
သူသည်အဘယ်သူမျှမမိဘ, သူတို့ကသူ၏စိတ်ကိုဖတ်ပါခဲ့မြင့်မားသော Schooler ခဲ့သူတို့ရဲ့သမီးအနီးလိုချင်ကြလိမ့်မယ်။
"ငါသည်အလွန်ကြမ်းတမ်း porn သို့ရတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါ့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့ဒီလိုမသိစိတ်ကိုအလိုရှိလာတယ်။ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အစစ်အမှန် - နက်ရှိုင်းသောလည်ချောင်း၊ လည်ချောင်း - စအိုကဲ့သို့သောအစစ်အမှန်လိင်ကိစ်စများ - ငါမူလကမကွိုက်ခဲ့ပါဘူး။
ယူဆပါသည်သူကြမ်းတမ်းဘယ်တော့မှခဲ့အလေးပေးပေမယ် Imprint ရှိ၏, သူ့စိတ်ထဲပေါ်အလေးချိန်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ရငျးနှီးသူ၏အမြင်ယိုယွင်းနေ။
အဆိုပါကမောက်ကမဖြစ်မှုလောင်စာသောပစ္စည်းပစ္စယကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ၏ Beyond Borders စာတမ်းဖတ်ပွဲအဆိုပါ Pornification အဘို့မြို့ထဲတွင်ယူဆပါသည်ပြောပါတယ်, ယနေ့တက္ကဆက်အင်တာနက် access ကိုအတူမဆိုဆိတ်သငယ်မှအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ porn ကဘာလဲ? "မျက်နှာအလွဲသုံးစားမှု - သူမ၏ပါးရိုက်။ လိင်တံကိုသူမတတ်နိုင်သလောက်အတင်းရွှေ့ခိုင်းနေချိန်မှာသူတို့ကသူမကိုငိုကြွေးကြပါတယ်။
ငါသည်ဤကော်လံတစ်ခုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် tagged နိုင် - သူပြီးသားဒီပစ္စည်းပစ္စယမြင်ကြရဲ့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုအင်တာနက်လမ်းညွှန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယူဆပါသည်ပြောပါတယ် - ဂျူနီယာရဲ့အနီးအနားမှာကသူ့ပြောင်းဖူးအလွှာချ chowing လျှင်စာမျက်နှာကိုဖွင့်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်စကားလုံးနုလှတွေနဲ့အတူ dispense ပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူ့သတင်းစကားင်: သင်၏ကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်တက်ဆွဲနေကြတယ်ဆိုတာကို Watch ။ သူတို့ရဲ့မျက်နှာရဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်း, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, သူတို့ကိုပြောဆိုပါ။
ကျနော်တို့အမာခံခေါ်လေ့ရှိတယ်။ ထိုသို့ပိုကောင်း descriptor ကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါဟာအကြမ်းဖက် Hyper-သိက္ခာနှင့် objectified နှင့်အနည်းငယ်သော့ချက်လေဖြတ်မှာနေရာအနှံ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ porn တခါ, စာမျက်နှာအားဖြင့်စာမျက်နှာ thumbed နှင့်မွေ့ရာအောက်မှာဒါမှမဟုတ်မြို့အမှိုက်ပုံမှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးတွေနေ့စဉ်အိပ်ခန်းထဲမှာ unsupervised မျက်နှာပြင်အချိန်လေးငါးနာရီ, သုံးဖြုန်းအဖြစ်ယနေ့တွင်တစ်မရှိသောစားသုံးမှုရန်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
porn မှစွဲ receptors နှင့် neurotransmitters အပေါ်သက်ရောက်မှုန်းမှာ, မူးယစ်ဆေးဝါးမှအလားတူဦးနှောက်ထဲမှာဓါတုဗေဒ hits ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ကြည့်ရှုသူများသည် desensitized ရပြောဆိုရန်ဒါ, ထိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖွင့်ကိုဖွင့်။ ယူဆပါသည်သည်သူ၏အလွဲသုံးစားမှုပြောပါတယ်, နှင့်အင်တာနက်အကူအညီနဲ့အုပ်စုများပူးပေါင်းအခွားသူမြားစှာ၏အကြောင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
porn Debasing ဆိရဲ့အလိုဆန္ဒ warps ။ ဒါဟာသူတို့ကျောင်းမှာမှာခန်းမမှာသူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုပုံကို, ယူဆပါသည်ကသတိပေး, ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးများကိုကြည့်ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာဘယ်မိန်းကလေးတွေနမ်းတာကိုမပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးနှုတ်ခမ်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပေးတဲ့ (သို့) စအိုလိင်ကိုခွင့်ပြုတဲ့ (အကြောင်းကို) ပြောခဲ့တာပါ"
နှင့်မိန်းကလေးများ sexting Amore, ကို virtual ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲအတွက်နည်းဗျူဟာဖြစ်သောတစ်ဦးက high-လောင်းကြေးယှဉ်ပြိုင်မှာသူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တင်သောနေကြသည်။
ဂျနီဖာလောရင့်စ်ကဤသို့ဆိုသည် -“ မင်းရဲ့ရည်းစားကညစ်တာကိုကြည့်တာလား၊ သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများသည်ရာဇ ၀ တ်မှုနေ့၏ပြင်းထန်သောအလင်းရောင်ဖြင့်ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးတော့ယူဆပါသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်မှောက်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးနှိုးဆော်ခြင်းရပါဘူး။ သူက ပို. ပို. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းတဲ့အစားအစာအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူတစ်ဦးရှည်လျားခက်ခဲအကူးအပြောင်းကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အအေးကြက်ဆင်သွား၏။
အချို့သောအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အတူ၊ အွန်လိုင်းသားကောင်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းမှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ရှိသည်။ သို့သော် Deem ၏ဇာတ်လမ်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ပို့ဆောင်သောလူမှုရေးစံနှုန်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးများတွင်အရည်အသွေးအပြောင်းအလဲရှိကြောင်း၊ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုအပေါ်သူတို့၏လွှမ်းမိုးမှု၊ သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူတို့၏နေရာကိုမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည် မြို့ပျက်နှင့်၎င်းတို့၏ funky သရဲခြောက်တဲ့ pubescent မိန်းကလေးများအလွယ်တကူဖော်ထုတ်နိုင်သည့်နေ့ရက်ကာလအဘို့တတောငျ့။ အပြစ်ကင်းစင်ခွင့်ရရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုအနံ့ခံစေသောကြက်အကောင်များကမသန့်ရှင်းသောလူအနည်းငယ်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့နေရာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကြားမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြီးပြင်းလာတာကိုတွေ့ရပြီး“ လူစိမ်းအန္တရာယ်” ကိုအော်ရန်သင်ကြားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများကိုကာကွယ်နိုင်သည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားမိသည်။
အင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်တစ်ဦး, ကြီးမားတဲ့လှပအံ့သြစရာကမ္ဘာကြီးမှာရေးသားထားပါတယ်။ သို့သော်ခရီး pernicious အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုစကားပြောသိမ်းဆည်းထားပါ, unreservedly ကိုချစ်။ တိုင်းယခုထပ်မံအိပ်ခန်းတံခါးကိုခေါက်။
တန်ဖိုးများကိုချရေးပြီးနှောင်ကြိုးခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါ။ သို့မှသာသင်၏သား (သို့) သမီးကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပြုသကဲ့သို့သူတို့အားလုံးကအဲဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည် - ဘာကြောင့်“ ဒါမမှန်တာလဲ” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အသံကိုလည်းကြားရ သူတို့ကိုအပေါ်ကိုထမ်းဆောင်သောဆိုးဝါးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။